Imalimboleko evikelwe yindawo ethengiswayo: iyini | TeraNews.net
Imalimboleko evikelwe yindawo ethengiswayo: kuyini
umbhali Izindaba zikaTera Kushicilelwe ku 03.09.2019
Imalimboleko evikelwe yindawo ethengiswayo ukutholwa kwemalimboleko yemali evela kumuntu oyedwa noma ibhizinisi elisemthethweni. Into efungisiwe yinoma iyiphi indawo ethengiswayo enenani elithile emakethe. Ukubolekwa okunjalo kuvame ukudidaniswa nempahla ebanjiswayo, okuyinto engalungile empeleni. Ngemuva kwakho konke, isihloko sesibambiso akuyona into oyithengayo.
Inkampani ngayinye enikela ngemalimboleko evikelwe yindawo ethengiswayo inemithetho yayo. Isibonelo, amabhange amaningi adinga isitifiketi semali engenayo. I-MFI MiG Credit Astana inikeza imali nganoma iyiphi injongo ngokuya ngohlelo olulula, ngaphandle kwamaphepha. Isikweletu ekuvikelekeni kwezindawo zokuhlala e-Almaty - Isixazululo esihle kakhulu sokuthuthukisa ibhizinisi lakho.
Imalimboleko evikelwe yindawo ethengiswayo: izinzuzo
Ukusebenza kahle. Inkinga ngawo wonke amabhange, ngaphandle kokukhetha ukwamukelwa okude kwemali mboleko evikelwe yindawo ethengiswayo. Ukubalwa kwezakhiwo, ukusesha kwamakhasimende kudatha yolwazi lwezinye izinhlangano, ukuvunywa kwesamba nehhovisi eliyinhloko, ukusayinwa kwezinkontileka zamazwe amaningi, umshuwalense. Inkampani iMiG Credit Astana iyayazi intengo yesikhathi.
Ukuthola imali mboleko udinga iphakethe lemibhalo okungenani:
Abantu ababodwa - le yimibhalo kamazisi futhi eqinisekisa ilungelo lesibambiso, kanye nesitifiketi sekheli nesitifiketi sokubhaliswa kwezezakhiwo;
Izinhlangano ezingokomthetho - lokhu kuyikhophi yemibhalo yendawo kanye namalungelo empahla, kanye nemvume yenhlangano ebusayo yalowo obolekayo kanye nesitifiketi sokubhaliswa kwezindawo zokuhlala.
Isilinganiso esifanele. Amabhange anentshisekelo yokudicilela phansi inani lempahla ethengiswayo edluliselwe njengokwabanjiswana. Kuyiqiniso, uma kwenzeka kuba nezinkinga, ibhange lisazoqhubeka lisiza. I-MiG Credit Astana ayihlanganyeli ekukhohliseni okunjalo - izindleko zilinganiswa ngamanani emakethe. Ngaphezu kwalokho, inkampani inensizakalo - ukuvakasha okunguchwepheshe kwamahhala kokuhlolwa kokuqala kwezezakhiwo ezibambisene.
Indlela yomuntu ngamunye. Ngaphezu kokubukela phansi inani lempahla ebambisene, amabhange ancengelwa ohlotsheni lwezinto ngokwazo. Imali inikezwa ngokuzithandela kuphela ekuvikelekeni kwezindlu ezisezakhiweni eziphakeme kakhulu. Amabhange azama ukuhlinzeka inani elincane lezinye izakhiwo. I-MiG Ikhadi le-Astana alizihlanganisi izindlu nomhlaba. Izindlu ezizimele, iziza zomhlaba, izinto ezingezona zokuhlala - akukho mingcele kulowo obolekayo. Uma kufiswa, iklayenti lizothola imali mboleko engaphezu kwe-50-60% yenani lempahla ebanjiswayo.
Imalimboleko evikelwe yindawo ethengiswayo: iziphikisi
Kukhona izingozi njalo, ikakhulukazi kulezo zimo lapho imali ithathwa ngenjongo yokuthuthukisa ibhizinisi kusuka ekuqaleni. Kepha ngisho kulezi zimo, inhlangano ye-MiG Credit Astana ilungele ukuyekethisa. Kunamathuluzi amaningi azosiza obolekayo ukuthi abambe imali mboleko evikelwe yindawo ethengiswayo ngempahla evumayo.
Lawa ngamabhange anentshisekelo ekubolekeni kobolekayo. IMco MiG Ikhadi le-Astana lisebenzela ikusasa. Lapho esethathe imali mboleko ngemibandela emihle, iklayenti lizophinda lifake isicelo futhi noma lituse inkampani kubangane nakubantu engibaziyo. Le ndlela ibhizinisi elakhiwa ngayo emhlabeni jikelele.
Impi yokuhweba yaseMelika neChina ifinyelela lapho ingekho ukubuya khona
Intela yedijithali evumela i-Apple neGoogle - umbono
I-Olympus - ukuphela kwenkathi yekhamera yedijithali
I-ZIDOO Z10 TV box: isikhungo semultimedia sasekhaya
Imfashini engama-2020 yama-sneakers: U-Adidas Samba ubuyile
AmaNimses, iBitcoin, iTesla: amaphiramidi ezezimali